The 25 lalao tsara indrindra ny 2015: 25-21 - News Fitsipika
The 25 lalao tsara indrindra ny 2015: 25-21
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “The 25 lalao tsara indrindra ny 2015: 25-21” dia nosoratan'i Stuart Keith sy Jordana Erica Webber, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 14 Desambra 2015 12.30 UTC
tsara, fa efa ho Noely, fa mahafinaritra fotoana fialam-boly rehetra, mpanoratra miala ny eritreriny, tsy ny fianakaviany sy ny namany, fa mba hamaranana-ny-taona lisitra endri-javatra. Ireto avy eo, no nentim-paharazana fikarakarana ny taona 25 lalao video tsara indrindra, dia nandahatra noho ny ekipa ny za-draharaha lalao mpanoratra - alohan'ny izy rehetra hanjavona ho fug ny eggnog sy Carol mihira.
Araka ny mandrakizay, Ireo no anaram-boninahitra manokana nahafinaritra izahay tamin'ity taona ity, tsy ny olona no nahatsapa no tena fangadiana na izay nahasarika ny hotorina hatraiza hatraiza fanakianana laza. Tsy tanjona na siansa -, na rariny, na ny antonony.
Na izany na tsy, lasa izao, amin'ny 25-21. Miverena isan'andro bebe kokoa tamin'ity herinandro ity.
Sakafo telo lehibe mahaforona ny horohoro ao Soma: lalina-dranomasina toerana, mutated biby goavam-be, ary existential natahotra. To ny bola, na ny voalohany amin'ireo dia underused ary ny faharoa ny fampiasana tafahoatra, ny fahatelo dia ampy hitondra ny lalao. Frictional no nakambana nitsambikina tsy tapaka sy ny feo mampatahotra ny tarihan'i fitepon'ny fo mba hampahatsiahy anao mba hiaina izany karazana saina avy hatrany tahotra, fa mahaliana kokoa amin'ny lavitra no filôzôfia, ara-tsaina horohoro nilalao avy amin'ny fitantarana izay mametraka fanontaniana momba ny maha manokana. Ny rehetra dia mahafantatra fa tena fisaintsainana no tena nanonofy ratsy natao ny.
24. mandra Dawn (PS4)
Ny iray amin'ireo tena manitikitika ny saina sy mitondra zava-baovao horohoro anaram-boninahitra ho maro taona, Mandra-Dawn mahita mpilalao miezaka mba valo namana velona rehefa mahita ny tenany voafandrika tao amin'ny lavitra mitoetra mandritra ny alina izay biby goavam-be Miafina ao amin'ny haizina. Fetsy fanakambanana singa Mangina Hill sy The Mandeha maty, ity tantara ifandrimbonana manome am-polony ny tsoa-kevitra mifototra amin'ny mpilalao zavatra - izany ny "lolo vokany" mpanamboatra izay manondro mahaliana azo atao momba ny hoavy ny hetsika traikefa nahafinaritra.
23. Lego Dimensions (maro format)
Activision dia tsy maintsy ho fantany hatramin'ny niandohany andro Skylanders fa Lego dia amin'ny farany ho azy manokana lalao ao amin'ny kilalao-ny-fiainana Genre, ary dia ho tsara kokoa. Sady koa anie, ireo dia tsy hoe kilalao, ry zareo kilalao izay mendrika ho any an-misy longstanding sokajy kilalao, ary ry zareo kilalao ny mpilalao mahazo hanorina ny tenany. Add izany ny fampidirana ny maro famelàna ireo, amin'ny tantara adaladala izay weaves amin'ny alalan'ny maro tamin'izy ireo, ary izany no tsara indrindra Lego lalao mbola, indrindra (toy ny mahazatra) raha nilalao amin'ny namana.
22. Olatra 11 (PC / Mac)
Olatra 11 Sary: Untame
Teraka tao amin'ny lalao Jak, fa angamba tsy mahagaga fa holatra 11 kokoa noho ny fitsipika inventive Puzzle platformer. Tsy vitan'ny hoe ny mpandray anjara fototra iray amorphous taova, ao anatin'ny vanim-Tranga (raha tsara tarehy) izao tontolo izao toa Mila asehontsika amin'ny fiainana olombelona, fa hanosika azy manerana 2D ambaratonga tsirairay amin'ny alalan'ny fandringanana sy mitsimoka indray. Indraindray toa hirotsaka toy ny ranon-javatra, fa raha ny marina manao toy ny mafy, ny mandrakizay-miovaova manome endrika ny lelam-pitana ho betsaka ny vaovao sy sarotra karazana Puzzles.
21. Ori sy ny jamba Forest (Xbox One)
Ori sy ny jamba Forest Sary: Microsoft
Na dia eo aza ny hippyish horaisintsika (tsy maintsy manampy ny fanahy hazo aina indray ny ala mifono zava-miafina), tsara tarehy io sehatra traikefa nahafinaritra avy indie iraisana Moon Studios dia saika nanaovany sarotra lalao ao amin'ny toerana, pitting anao hamely ny Folk angano tontolo iainana feno fandrika mahafaty lalamby sy mahatahotra zavaboary. Fa ny luscious toerana manodidina sy ny deft tetika hahita anao amin'ny alalan'ny. Toy ny Rayman andian, Ori mampiseho be dia be ny fiainana, lalina sy fanahy sisa ao an-2D scrolling genre.
The Guardian Games 'Review ny taona' no mitranga ao amin'ny Guardian ny Scott Room ny alakamisy hariva, 7-8.30PM. Mampiseho Keith Stuart, mpanoratra Simon Parkin sy Cara Ellison sy lalao developer Mike Bithell, Ho jery todika isika amin'ny 2015, amin'ny nitsitsy pies sy ny goavam-be Xmas Tombola! Tickets hita eto.
← Amazon misintona hoverboards ny fiarovana tahotra The 25 lalao tsara indrindra ny 2015: 20-16 →